Sendwithus: Ovay, andramo ary refesina ny mailaka transactional | Martech Zone
Sendwithus: Manamboatra, manandrana ary mandrefy ny mailaka transactional
Alatsinainy 10 Febroary 2014 Alatsinainy 10 Febroary 2014 Douglas Karr
Raha sehatra mandefa mailaka transactional ianao, mety ho hitanao fa manana kaody sarotra any ambadika izy ireo ary sarotra ny manova azy ireo raha tsy misy ny fanampian'ny mpampivelatra anao. Ny mailaka am-pivarotana dia mailaka alefa any amin'ireo olona ifandraisanao amin'ny raharaham-barotra ary tsy mora tohanan'ny fanarahan-dalàna izy ireo (midika izany fa tsy mila rohy tsy misoratra anarana). Ny mailaka transactionaly na rafitra mazàna dia mahazo misokatra bebe kokoa ary tsindrio isaky ny vidiny ka izany dia tena fotoana mety hanamasinana ny mpanjifanao hanatsara ny fihazonana, famelomana na fanabeazana azy ireo.
Ity misy fitsangatsanganana an-tsehatra ataon'izy ireo:
Raha tsy maintsy mametraka fangatahana fanovana isaky ny mailaka anatiny ianao, dia ho hitanao ny fahanteran'ny raharaha. Sendwithus dia sehatra fampivoarana lehibe hampifangaro ireo mailaka azo volavolaina, tantanana ary arahana tsy misy izany fangatahana fanovana izany. Mampiditra ny Sendwithus fotsiny ny developer anao API hiantso ny mailaka mety ary manao ny ambiny izy ireo.
Sendwithus Seho amin'ny lampihazo
A / B Fitsapana voaorina ao anatiny - manandrama haingana ny hevitra sy ny atiny vaovao.
Analytics - refesina mailaka natolotra, nosokafana ary rohy voatsindry.
Fanovana mailaka - manavao mora foana ny mailaka ivelany amin'ny rafitrao.
Sendwithus mifandray amin'ny ankamaroan'ny mailaka be indrindra sy fandefasana mailaka transactional - SendGrid, Mailgun by Rackspace, Mandrill, Dyn ary Serivisy mailaka tsotra Amazon avy ao anaty boaty.
Tags: Serivisy mailaka tsotra Amazonmailaka betsakaserivisy mailaka betsakaDynMailgunMailgun avy amin'i RackspacemandrillSendgridsendwithusmailaka transactional
Aza voajirika amin'ny Twitter. Mampiasà fanamarinana Login!